Jery taratra… herinandro : izay mivoaka: vavany avokoa… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : izay mivoaka: vavany avokoa…
Par Taratra sur 11/06/2016
Nanazava ny fangatahan’ny minisiteran’ny Atitany ny Afo sendikaly ny amin’ny hoe misandoka ho mpitarika ny sendikàn’ny administratera sivily, nanome 72 ora ny fandravana ny governemanta, nanala baraka ny vadin’ny filoham-pirenena… Mitohy ny fitakiana iadiana amin’ny kolikoly.
Tsy mbola misy ny fangatahana ny fanalana ny zo tsy azo enjehina ny loholona Lylison René de Roland, raha ny filazan’ny filohan’ny Antenimierandoholona. Nandinika ny amin’izany ny birao maharitra. Nilaza ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa efa mivoaka ny didy fampisamborana azy.
Nanazava ny eo anivon’ny fampanoavana fa tratra ambodiomby amin’ny fanakorontanana io loholona io. Izay no ikarohana sy isamborana azy. Tsy ilaina ny fangatahana fanalana ny zo tsy azo anjehina. Ahoana izany ny hoe nangataka izany tany amin’ny Antenimierandoholona ny fitsarana?
Nilaza ny lehiben’ny Emmo/Reg Analamanga fa misy ny mikotrika hanakorontana ny fankalazana ny 26 jona. Misy ny anarana fantatra amin’izany. Ho henjana ny fitandroana ny filaminana mialoha sy mandritra ny 26 jona. 800 ny mpitandro filaminana hisahana izany ho an’Antananarivo.
Nilaza ny “Asandratro ny fireneko” fa tsy ilaina ny fankalazana ny 26 jona, fa tsy mbola mahaleo tena i Madagasikara. Mila takina ny tena Fahaleovantena. Tsy vahaolana ny fifidianana fa ny fanovan-drafitra, tsy fanomezana toerana ny mpiray tsikombakomba amin’ny mpanjanaka…
Hanome vola 310 tapitrisa dolara an’i Madagasikara ny iraky ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI). Fepetra ny amin’ny ady amin’ny kolikoly, fanitsiana ny tetibolam-panjakana, fampitomboana ny fampidiran-ketra… Hanapaka ny fanomezana izany ny filankevi-pitantanan’ny FMI.
Namoaka fanambarana momba ny “Asa sy fampandrosoana” ny Sefafi: tofoky ny kabary tsara lahatra sy ny safosiaka mampandry adrisa ny vahoaka. Tsy mifanaraka amin’ny asa sy ny vokatra ny kabary sy ny fampanantenana. Mitsoka ny afom-pahatezeran’ny vahoaka amin’ny ankapobeny izany.
Izay mivoaka rehetra, babany avokoa? Na vavany avokoa…